PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-04-15 - VUKA UZITHINTITHE:
Ilanga langeSonto - 2018-04-15 - Izindaba - 1. UNENGANE MINA ANGINAYO
PASTOR, nginenkinga, nginomuntu wesifazane engithandana naye kepha unengane kanti mina anginayo. Ekhaya abafuni ukuba ngithandane nomuntu onengane. Inkinga yami ngiyamthanda, bengicela iseluleko.
IMPENDULO: Mfowethu ukukhula empilweni nokukhululeka othandweni yilapho abantu ababili bevumelana khona, engekho owesithathu. Uma ngithi engekho owesithathu ngifaka amakholwa, abazali nabangani nayo yonke into ongayicabanga.
Uthando lwenziwa ngabantu ababili, bavumelane bona. Uma wena nesithandwa sakho nivumelana ngayo yonke into othandweni lwenu, akunandaba ukuthi abanye abantu bathini, kangangokuthi nakini bayokuthobela uma sebebona ukuthi umuntu uyamuthanda.
Kumele uqaphele ukuthi othandweni akufuneki ubuze abantu ozalwa nabo nabangani ukuthi umuntu othandana naye unjani, kodwa ubobatshela ukuthi uyamthanda. Bazokweseka ekugcineni ngoba wena bayakuthanda - uma bekuthanda bayothanda yonke into oyithandayo.